musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Pedyo neMiriyoni imwe marobhoti Iye zvino muChina Mafekitori
Mushumo mutsva weWorld Robotics 2021 Industrial Robots wakaunzwa neInternational Federation of Robotics (IFR) inoratidza rekodhi yemarobhoti e943,000 emaindasitiri ari kushanda mumafekitori eChina nhasi - kuwedzera kwe21%. Kutengeswa kwemarobhoti matsva kwakakura zvakasimba nezvikamu zve 168,000 zvakatumirwa muna 2020. Iyi i20% yakawanda kana ichienzaniswa ne2019 uye yakakosha zvikuru yakambonyorwa kune imwe nyika.
"Hupfumi hweNorth America, Asia neEurope hauna kuona Covid-19 yakaderera panguva imwe chete," anodaro Milton Guerry, Mutungamiriri weInternational Federation of Robotics. "Kutora nekugadzirwa kwemaodha muindasitiri yekugadzira yeChina kwakatanga kukwira muchikamu chechipiri cha2020. Hupfumi hweNorth America hwakatanga kusimuka muhafu yechipiri ya2020, uye Europe yakatevera gare gare."
Vagadziri vemarobhoti veChinese vainyanya kudyira kumusika wepamba, kwavakabata chikamu chemusika che27% muna 2020 (45,000 units). Kugova uku kwave nekumwe kushanduka kwave kusingaite mumakore 8 apfuura. Muna 2020, kuiswa kwemarobhoti ekunze - kusanganisira mayunitsi akagadzirwa muChina nevasiri veChinese vatengesi - akakura zvakanyanya ne24% kusvika 123,000 mayunitsi muna 2020 aine chikamu chemusika che73%.
Kuiswa kwemarobhoti epasi rose kunotarisirwa kudzokororwa zvakasimba uye kukura nezvikamu gumi nenhatu kusvika ku13 muna 435,000, zvichidarika rekodhi rekodhi rakawanikwa muna 2021. Kuiswa muNorth America kunotarisirwa kuwedzera ne2018% kusvika kumayunitsi angangoita 17. Kuiswa muEurope kunotarisirwa kukura ne43,000% kusvika kunosvika zviuru makumi manomwe nezvitatu. Kuiswa kwemarobhoti muAsia kunotarisirwa kudarika mazana matatu ezviuru zvemayunitsi uye kuwedzera 8% kune mhedzisiro yegore rapfuura.